Google Map API: Chọta, Dọrọ na Melite Ọnọdụ M | Martech Zone
Azụtara m Google Map Hacks ụnyaahụ mana enwere m obere mmechuihu na akwụkwọ ahụ. Ọ bụghị mmejọ nke onye edemede ahụ, mana akwụkwọ ahụ adịlarị ugbu a kemgbe ịhapụ Google's Geocoder na mbipute Google nke 2 nke API.
E nwere ọtụtụ njikọ na akwụkwọ ndị ahụ ka m nwee ike nyochaa ụyọkọ saịtị wee hụ otu ha si emegharị na nsụgharị ọhụrụ ahụ. M na-arụpụta mwepụta maapụ maka saịtị ọhụrụ m na-ewu. Nzọụkwụ mbụ ga-abụ maka mpaghara inwe ike itinye adres ha na maapụ wee melite ọnọdụ ha ma ọ bụrụ na akara ahụ anọghị n'ọnọdụ zuru oke.
Enhancefọdụ nkwalite m meworo:
Iji V2 Geocoder
Iji arụmọrụ dọrọ na maapụ
Na-emelite ohere na longitude na otu ụdị (enwere ike zoo ha)
Chịkọta latitude na longitude na nkenke ọnụọgụ 8
Gbanyụọ ụdị ahụ ka onye ahụ ghara ịgbakwunye karịa otu ebe
Pịa Ebe a maka na-arụ ọrụ ngosi.
Emere m akara aka m maka nhọrọ dị elu. Biko hapu okwu na ntinye a ma oburu na ‘ibiri’ koodu m ma o buru na imalite ya n’uzo. Ọ ga-amasị m ịhụ ihe ị ga-eme. Nzọụkwụ m ndị ọzọ bụ maka onye ọrụ iji họrọ ụdị akara ngosi ha ga-achọ yana ịwụnye onyonyo onyonyo na windo ozi.
Enwere ike iji koodu ahụ - ị nwere ike inye onyinye a Daalụ nye Paypal m.
Dec 23, 2006 na 10:50 PM
M kpaliri ụfọdụ n'ime saịtị m. Ebe ọ bụ na m ka malitere Adreesị Adreesị Egosiri m ihe ọ bụla banyere saịtị ahụ.
Obere typo na URL http://www.addressfix.com,
Wepu “,” na njikọ ahụ na-arụ ọrụ 😛
BTW, nnukwu oru ngo. 🙂
Daalụ, Aswin - M edozi ya! Nke ahụ bụ ọrụ na-atọ ụtọ.
Aug 24, 2007 na 11:41 PM
Hey, Nnukwu ọrụ na ọrụ a! I kwuru na anyị nwere ike ịgbaziri ma melite koodu ahụ, mana kedụ ebe ọ dị?
Aug 25, 2007 na 10: 35 AM